Abavelisi beeNgxowa zeT-Shirt ezitshintshiweyo kunye nabathengisi | Imiqobo yokukhokela
Isikipa esineehempe ezinokuchuma
Ingxowa ye-t-shirt encomekayo ayisiyiplastiki
Nokuba ngaba ziingxowa ze-t-shirt ezinokuchuma okanye izinto zokwenza imveliso, sidlulile kuvavanyo kunye nokuqinisekiswa kwe-EN13432. Ngokusebenzisa iibhegi zokuthenga kwizixhobo ezinobuhlobo kokusingqongileyo ubonisa umhlaba ongaphandle kunye nabathengi bakho ukuba unembonakalo eluhlaza kunye nenkxaso yophuhliso oluzinzileyo.
Kwimeko apho ufuna iibhegi zesikipa ezinenzuzo kunye noyilo lwakho kunye nelogo, iiLeadpacks zinokunceda. Sibonelela ngeengxowa ngobukhulu obahlukeneyo, iimilo kunye nezinyuko ukuze zilungele zonke iimfuno. Singongeza iilogo, imifanekiso okanye nayiphi na imiyalezo ejolise kwiprofayili. Iingxowa ze-t-shirt ezinokuchuma zishicilelwe ukuya kuthi ga kwimibala esi-8 kumacala amabini.
Isikipa esinee-Compostable zeShelf Life ziinyanga ezili-10-12.
Igama lomxholo Isikipa esineehempe ezinokuchuma
Izinto eziphathekayo Pla / PBAT, Umbona Starch
Ukusetyenziswa Ukuthenga / ukuPhakamisa / i-Boutique / Ukutya / Ukuthatha uhambo / Ivenkile enkulu, njl
Okwangoku singqina umdla okhulayo wokunciphisa ukusetyenziswa kweeplastiki zemveli, zombini ngabathengi kwaye, ngakumbi, nangabezopolitiko. Amazwe aliqela sele angenise isibhengezo ngokubanzi kwiingxowa zeplastiki kwicandelo lokuthengisa. Le meko isasazeka kwihlabathi lonke.
Iingxowa zeephedi zeepakethe kwi-100% yezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane kunye nezinto ezinokuchuma zinokuba negalelo kwiprofayili eluhlaza yenkampani ngelixa kwangaxeshanye zinceda ukuphucula imeko-bume. Ngesazela esicocekileyo, ungazisebenzisa iibhegi zesikipa ezinenzuzo yazo nayiphi na injongo kwaye uzenze ngomgquba emva kokusetyenziswa.
Iingxowa zeengxowa ze-t-shirt ezinokuchuma zisekwe kwinxalenye enkulu yezixhobo ezinokuhlaziywa ezivela kwizinto ezisekwe kwizityalo. Oku kuthetha ukuba i-CO2 encinci ikhutshelwa esibhakabhakeni, kuba izityalo zifunxa i-CO2 njengoko zikhula, ngokwenjenje zenza impembelelo encinci kwindalo esingqongileyo kunakwenziwa kweplastiki esekwe kwioyile.
Egqithileyo I-Oxo-ezinokuboliswa ziintsholongwane
Okulandelayo: Isikipa se-Oxo-Biodegradable
Iingxowa zeT Shirt ezinokuchuma